छोरा आफ्नो भएको प्रमाणित भएपछि ८८ वर्षको उमेरमा विवाह !
एजेन्सी । भारतमा केही यस्ता चर्चित राजनीतिज्ञहरु छन् जो लभअफेयरका कारण ठुलै विवादमा परे । उनीहरुमाथि यौन शोषण गरेको अरोप पनि लाग्यो । वरिष्ठ नेता भएका कारण पनि उनीहरुले ठुलै दबाब झेल्नु पर्यो । तीमध्येका एक नेता हुन् एण्डी तिवारी ।
गर्भवती भएको थाहापाएपछि हतारमा विहे गरेका अभिनेत्रीहरु
विवाह गर्न युवाहरु नै नभएपछि विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्दै युवतीहरु !
छोराछोरीले विवाह ढिलो वा चाँडो गर्नु आमाबुबा प्रमुख कारण !
एजेन्सी । अमेकिाको ओहियो स्टेट विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताका अनुसार महिला जसको विवाह कम उमेरमा भएको छ तर विवाह टिकेको छैन वा डिभोर्स भएको छ भने उनीहरुको बच्चाहरु विवाह गर्न ढिला रुचाउने गर्छन् । सायद उनीहरु आफ्ना आमाबुबाले गरेको गलत निर्णयबाट बच्न चाहन्छन् ।
विवाह गरेर पछुतो मानेका अभिनेत्रीहरु
एजेन्सी । आधुनिक समाजमा अब विहेको परिभाषा नै परिवर्तन हुन थालेको छ । समाजमा रहिआएको चलन र परम्परा तोडिने क्रम विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ ।
यस्तो पनि चलन !
विवाहपुर्व पुरुषले कस्ता खानेकुराहरु खाने ?
पुरुषहरुले महिलाले जस्तो सुन्दरतामा ध्यान दिंदैनन् तर बिबाह अघि पुरुषहरु आफ्नो शारिरिक सुन्दरता र व्यक्तित्व कसरी आकर्षक बनाउने भनेर धेरै चिन्तित हुन्छन् ।